15 Dhiirri -gelinta xigashooyinka Leslie Knope ee Hoggaanka & Adeegga -
Bogga ugu weyn 15 Dhiirigelinta Xigashooyinka Leslie Knope ee Hoggaanka & Adeegga
Isha sawirka: www.time.com
Haddii aad taageere u tahay fadhiyada NBC, markaa waxaad u badan tahay inaad maqashay xigashooyinka Leslie Knope. Leslie Babara Knope wuxuu ahaa jilaagii showga “Jardiinooyinka iyo Madadaalada”.
Waxaa jilay jilaaga Amy Poehler, Leslie Knope waxay ahayd qof aad u jecel oo aaminsan in dowladda ay tahay inay u adeegto dadka. Maaddaama ay tahay marwo caqli badan oo doonaysay in qof kasta oo ka mid ah meelaheeda uu guulaysto, qaar ka mid ah fekerkeedii ku aaddanaa hoggaaminta iyo adeegga ayaa hore u sii socday si ay u noqdaan xigashooyin dhiirri -gelin u ah dadka oo dhan.
Amy Poehler waxay ciyaaraysaa doorka Leslie Knope oo u adeegta Agaasime Ku -xigeenka Waaxda Jardiinooyinka iyo Madadaalada ee magaalada khiyaaliga ah ee Pawnee, Indiana.
Leslie waxay ahayd a "Dumar timo jaale ah oo jecel waffles iyo wararka." Comically, waxay ku jeclayd shaqaalaheeda iyo asxaabteeda qallafsan, hal -abuur, iyo daacadnimo aan shuruud lahayn oo ay tahay inay na dhiirrigeliso dhammaanteen. Leslie waxay had iyo jeer doonaysay in qof kasta oo ku jira meelaheeda uu guuleysto, helo farxad, oo adduunka ka dhigo meel ka wanaagsan.
Maqaalkani wuxuu sharxayaa 15ka xigasho ee ugu sarreeya dabeecadda khayaaliga ah ee Leslie Knope oo ku saabsan hoggaaminta iyo adeegga.
Ku saabsan Astaamaha "Leslie Knope"
Leslie waxay ka qalin jabisay 5% ugu sareysa fasalkeeda Dugsiga Sare ee Pawnee North. Waxay ahayd Ku-xigeenka Madaxweyne ee Ururka Ardayda iyo xubin ka ah Model United Nations.
Waxay ka tirsanayd ururo kale sida Naadiga Furaha, Naadiga Doodda, Maxkamadeynta Mock, Dimuqraadiyiinta Da'da yar, Madax -bannaanida Dhallinta (xubinta aasaasay), Naadiga Riwaayadaha, Bulshada Taariikhda, Orchestra, Ilaalada Midabka, iyo xeegada beerta yar -yar.
Kadib, waxay dhigatay Jaamacadda Indiana halkaas oo ay kaga qalin jabisay summa cum laude oo ay ka heshay shahaadada Taariikhda Dugsiga Deegaanka iyo Arrimaha Dadweynaha.
Iyada oo ah haweeney xoog badan, hami leh oo ku nool magaalo aysan dadku had iyo jeer aaminin, Leslie Knope waxay ku dheggan tahay xukunkeeda mana u oggolaato wax kasta inay hor istaagaan sidii ay shaqadeeda u qaban lahayd oo ay u caawin lahayd dadka soo doortay. Waxay taqaanaa sida loo dhiirrigeliyo dad badan, waxay si joogto ah u taageertaa oo u xoojisaa asxaabteeda iyo kuwa ay jeceshahay, oo waligeedna kama tanaasusho riyooyinkeeda iyo himilooyinkeeda.
In kasta oo Leslie Knope ay tahay dabeecad mala -awaal ah, haddana inta badan xigashooyinkeeda ku aaddan hoggaaminta waxay u taagan yihiin imtixaanka waqtiga.
Sidoo kale akhri: 25 xigashooyin cusub oo ku saabsan xoogga iyo Agility sanadka 2021
15 Xigashooyin ku Saabsan Hoggaaminta iyo Adeegga Leslie Knope
Waa kuwan xigashooyin ka soo baxay Leslie Knope oo kugu dhiirrigelin doona inaad hoggaamiso oo aad u adeegto.
#1. "Hal qof oo xanaaqsan waa dhiirrigelin iyo geesinimo qof kale."
Xigashooyinkani waxay u muuqdaan waxoogaa qosol leh laakiin waxaa laga yaabaa inay tahay xigashada ugu habboon ee aad halkaas ku arki doonto. Waa xusuus weyn oo ah inaad tahay bini -aadam kaliya oo aadan ka farxin karin qof walba, marka waa inaad diyaar u ahaataa inaad taas aqbasho.
Ka soo qaad Knope - waxay u badan tahay in qof kasta oo u maleeya inaadan ku fiicnayn shaqadaada, in dad badani ku ixtiraamaan oo ku eegaan.
Knope wuxuu isku dayayaa inuu na ogeysiiyo in, in kasta oo hal qof ku jeclaan karo, kan kalena uu ku yeelan karo falcelin liddi ku ah. Hoggaamiye ahaan, ma awoodi doontid inaad ka farxiso dadka oo dhan gaar ahaan sababta aan dhammaanteen u gaar nahay.
Haddaba, qalbiga ha u qaadan in dadka qaar go’aamadaada ka soo horjeedaan; yaan hal qof ra'yigiisu kugu dhicin. Kaliya sii wad shaqada wanaagsan oo xasuuso 'inaad tahay qof dhiirran oo geesinimo leh'.
#2. "Waxa aan maqlo marka la igu qaylinayo waa dad aad ii daneeya."
Marka ugu horeysa ee aad eegto xigashadaan xiisaha badan, waxaa laga yaabaa inaad xoogaa wareerto. Sida, 'sidee baa dhab ahaan dadku u qaylinayaan sababta ay u daneeyaan?' Waa hagaag, rajada weligeed ah ee Leslie waxay ahayd mid ka mid ah hantida ugu wanaagsan dabeecaddeeda. Si kasta oo ay wax u dhacayaan, waxay taqaanay sida loo arko wanaagga xaalad xun.
Si gaar ah, gaar ahaan, haddii aad waligaa ku dhexjirto saaxiib, saaxiib ama shaqaale, ha u qaadan qalbiga. Taa bedelkeeda, soo ogow sababta isaga/iyadu kaaga xanaaqsan tahay oo raadi hab aad ku xalliso dhibaatada .. Sababtu waxay u badan tahay inay sabab u tahay inay adiga kaa filanayaan mid ka fiican ama ay kaa rabaan inaad soo toosto oo aad ursato ubaxyada.
#3. “Waxaan u baahannahay inaan xusuusanno waxa muhiimka u ah nolosha: saaxiibbada, wafafka, shaqada. Ama waffles, saaxiibbo, shaqo. Muhiim maaha, laakiin shaqadu waa ta saddexaad. ”
In kasta oo waffles -ka laga yaabo in aan loo xisaabin mudnaanta, Leslie waxay lahayd fikrad sax ah. Shaqadu runtii waa inay noqotaa mid saddexaad. Waxaan u baahannahay inaan ogaano sida aan muhiimadda u siinno waxyaabaha annaga na khuseeya gaar ahaan marka ay timaaddo saaxiibbada iyo qoyska.
Waxaan maqalnaa wax badan oo ku saabsan shirkado beddelaya shaqaalaha daqiiqado gudahood markay dhintaan, maxaad u dooneysaa inaad taas ku dul saarto qoyskaaga iyo saaxiibbadaada. Mid wanaagsan Leslie!
#4. "Waxaan u baahanahay inaad ii soo dirto farriin 30 ilbidhiqsi kasta in wax walba hagaagi doonaan."
Xataa markaad adigu masuul ka tahay, mar walba suurtogal ma aha inaad kaligaa wax walba maamusho. Mararka qaarkood, waxaad u baahan tahay saaxiib ama saaxiib si uu ku siiyo taageero. Hagaag, laga yaabee in wicitaan ama qoraal laguugu soo diro 30 ilbidhiqsi kasta waa xoogaa fiditaan ah laakiin waan hubaa inaad fikradda heshay.
Xusuusnow inaadan kaligaa ahayn iyo in uu jiro nidaam taageero oo dhan oo xidid kuu ah. Marna ha ka xishoon inaad qiratid inaadan wada haysan. Noqo sida Leslie oo kale, waxay ogayd inay haysato Ann. Hubi inaad hesho 'Ann'.
#5. "Aad ayaan u weynahay inaan qirto inaan inta badan naftayda dhiirrigeliyo."
Waxaa jira saddex iyo toban sawir oo qaabeysan oo ku yaal derbiga xafiiska Leslie. Waxay ugu yeertaa “Darbiga Haweenka Dhiirrigelinta ah”. Laba iyo toban ka mid ah haweenkan waa shakhsiyaad taariikhi ah, oo ay ku jiraan Bella Abzug, Condoleeza Rice, iyo Sally Ride.
Qaabka saddex iyo tobnaad ayaa haya sawirka Leslie, lafteeda. Ka fogee Egos, waxaa muhiim ah in la xusuusto kuwii kaa horreeyey oo loo oggolaado inay sii wadaan inay kugu dhiirrigeliyaan inaad qabato shaqadaada ugu fiican.
Mararka qaarkood, marka aad ku daadato qashin -qubka, waa caadi inaad naftaada waxyoon ka soo qaadato. Noqo dhiirrigeliyahaaga shaqsiyeed, sii naftaada xaqiijinta oo u soo bax si aad ula kulanto adduunka ololaya!
Tani waa xigasho kale oo dhiirrigelisa Leslie Knope oo ku saabsan hoggaanka iyo adeegga.
#6. "Waxaan haystaa lacagta ugu qiimaha badan Ameerika: indho la ', madax adag oo rumaysan inaan 100% sax ahay."
Nolosha dhabta ah, dabeecaddani waxay sababi kartaa dhibaatooyin dhab ah goobta shaqada, laakiin aan si dhow u fiirino. Dabeecadda Leslie Knope is awood u leh inay beddesho maankeeda.
Si kastaba ha ahaatee, iyadu marna ma rabto inay ka tanaasusho mabaadi'deeda. Waxay ku taagan tahay qiimaheeda mana ka quusato yoolalka kooxdeeda. Runtii ma jirto wax ka sharaf badan haweeneyda garaneysa waxay rabto, sida ay rabto iyo goorta ay rabto. La joog calooshaada oo meel istaag.
#7. "Hey, Leslie. Waa Leslie. Halkaas ku dheg. Waan ku jeclahay. Bye. ”
Markaad ku mashquulsan tahay isu -dheellitirka wax kasta oo kale, waa jirrabaad inaad u oggolaato baahiyahaaga inay hoos ugu dhacaan guntinta mudnaanta leh. Laakiin waa isla daqiiqadahaas marka aan u baahan nahay inaan daryeelno nafteena.
Is-daryeelidda hoggaamiye ahaan aad bay muhiim u tahay si aadan u noqon mid u baahan in la hoggaamiyo (isbitaal si loo baaro).
Daacadnimo, in kasta oo ay fududahay in la iska iloobo inaad iska hubiso mas'uuliyado badan, laakiin Leslie waligeed ma dhicin inay xusuusato inay iyaduna u baahan tahay xoogaa TLC ah. Naftaada dibadda u soo saar oo naftaada xusuusi in wax walba ay ku hagaagi doonaan waqtigooda.
#8. "Waxaad heleysaa hal fursad oo kaliya si aad u sameyso aragti labaad."
Dareenka koowaad waa muhiim, laakiin maahan wax walba. Haddii aad ka tagto kulan, shir, ama dhacdo kasta oo aad dareento inaadan ka tagin aragtida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, ha xanaaqin, taa beddelkeeda, xoogga saar sida aad wax uga baran karto waayo -aragnimadaada oo aad u tusto naftaada ugu fiican marka xigta isdhexgalka.
Xitaa waxaad diyaarin kartaa is -dhexgal macmiilka la beegsanayo. Wax kasta oo aad sameyso, ka dhig kulanka ugu fiican abid oo madaxaaga kor u qaad! Dareenka koowaad waa wax walba… marka laga reebo marka aysan ahayn!
Kani waa xigasho kale oo Leslie Knope ku saabsan hoggaanka iyo adeegga.
#9. “Shalay waxaan ahaa mid adag oo toos ah; maanta waa inaan noqdaa mid soo jiidasho leh. Asal ahaan, shalay waxaan ahaa Hillary Clinton maantana waxaan ahay Bill. ”
Hoggaamiyayaasha wax -ku -oolka ah waxay leeyihiin hal xirfad oo kaliya - ogow dhagaystayaashaada. Haddii aadan si wanaagsan u gaarsiinayn farriintaada talaabo dib u qaad oo go'aanso sida aad u beddeli karto dhaqankaaga iyo codkaaga.
Haddii aad la macaamilayso dadka u maleeya inay heleen geedka dhammaadka gaaban, markaa waxaad u baahan tahay inaad hoos ugu soo degto heerkooda, ku jir kabaha. Hoggaamiyaha wanaagsani wuxuu leeyahay shakhsiyaad badan iyo wajiga oo laga dheehan karo kulamo kala duwan.
#10. "Wax kasta oo aan sameeyo, macno ahaan wax xun iguma dhici karaan. Waxaan la mid ahay senator Mareykan ah oo caddaan ah"
Xigashadan Leslie Knope waa mid weyn maxaa yeelay waxay ku saabsan tahay cabsi la'aan. Hiigsi -yahannadu waa kuwa wax walba ka hor arki kara dadka kale. Isku kalsoonow oo laga yaabee inaad mararka qaarkood noqoto mid aad ugu kalsoon, xirfadahaaga, xulashooyinkaaga, armaajadaada, xulashada cuntada (kaftanka!), Iwm. Laakiin dhab ahaantii, halkaas u bax oo u cabsoon sida Boqorka Jaadka
#11. "Waxaad leedahay dhammaan awoodaha"
Ku kalsoonow xirfadahaaga. Weligaa ha u maleynin inaadan ka soo bixin hawshii aad gacanta ku haysay maxaa yeelay waxaad tahay qof ku filan.
Waxaa jiri doona waqtiyo aad dareento inaadan haysan waxa ay qaadato. Waxay noqon kartaa fikradaha dadka kale, ama xitaa sababtoo ah waa mid ka mid ah maalmahaas. Had iyo jeer xusuusnow, 'Waxaad ka awood badan tahay, waxaad haysataa waxa ay qaadanayso si aad shaqada u qabato!'
#12. “Waxaan u baahanahay qorshe wanaagsan inkastoo. Ma doonayo inaan argagax keeno. ”
Hoggaamiye ahaan, waxaa lagama maarmaan ah in laga fogaado argagaxa xaaladaha daran iyo xaaladaha. Leslie waxay haysaa fikradda saxda ah, waxay istaraatijiyad samaysaa ka hor intaanay dhaqmin. Ma jiro wax ka wanaagsan hoggaamiye yaqaan sida looga hortago mashaakilka ka dhex jira dadka.
#13. “Dhibaatada raccoon ayaa gacanta lagu hayaa. Waxay leeyihiin qaybtooda magaalada annaguna annagaa leh. ”
Kani waa xigasho kale oo Leslie Knope oo ku saabsan hoggaaminta iyo adeegga ..
Mararka qaarkood, meel yar ayaa dhammaan aadanaha iyo noolaha nooc kasta leh u baahan yihiin inay is raacaan. Ma aha in qof walba ku khasban yahay inuu wada noolaado sidaa darteed ixtiraamka xuduudaha dadka kale waa mid aad muhiim u ah. Hoos, khadka inkasta oo laga yaabo in heshiis dhab ah loo baahdo, laakiin hadda, muuji xuduudaha! Xusuusnow in kastoo, isku dhacu waa dabiici marka laba qof oo kala aragti duwan ay kulmaan.
Sidoo kale akhri: 80 Quful Florence Nightingale Quotes Ku Saabsan Kalkaalinta & Nolosha (2021)
#14. “Waxaan ula jeedaa taasi waa sababta ay dadku aad u ixtiraamaan Hilary Clinton sababtoo ah qofna ma qaato feer sida iyada oo kale ah. Iyadu waa bacda feeraha ugu xoogga badan, uguna caqli badan ”
Waa wax iska caadi ah in siyaasiyiintu garaacaan afka, ha ahaadaan kuwa ka soo horjeeda ama xitaa dadka.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad qaadan karto feeraha oo aad weli ka soo baxdo xoog, waxay u muuqataa inay ixtiraam ku siinayso. Wax la mid ah hoggaamiye ahaan; kaliya waa inaad ku duudduubtaa feeraha.
Marna xoogga saar waxyaabaha xun ee dadku sheegaan (haddii aysan ahayn walaac dhab ah oo u baahan hagaajin). Diirada saar oo keliya dhinaca togan iyo sidoo kale sidii hore loogu socon lahaa.
#15. “Waxaan nahay ummad riyoonaya, waana riyadayda inaan dhiso beerta aan maalin maalmaha ka mid ah la booqdo shaqaalahayga Aqalka Cad. Waxayna dhahaan, 'Madaxweyne Knope, beertaani waa mid laga cabsado. Hadda waxaan fahamsanahay sababta aad u noqotay haweeneydii ugu horreysay ee Madaxweyne ka noqota Mareykanka. ”
Intii Leslie jeclayd Hilary Clinton, marna uma oggolaan inay taasi hor istaagto aragtideeda ah inay noqoto haweenaydii ugu horreysay ee Madaxweyne ka noqota Maraykanka. Waad u bogi kartaa 'herooyinkaaga' laakiin marka riixitaanku yimaado si aad u ruxdo, marnaba ha u oggolaan qofna inuu hor istaago riyadaada.
Tusaale ahaan, Jeff Bezos xaqiiqdii kama niyad jabin Elon Musk inuu noqdo ninka dunida ugu taajirsan. Marka, ha u oggolaan qof aad eegto inuu kaa hor istaago inaad gaarto yoolkaaga ugu dambeeya.
Inta badan xigashooyinkan ayaa laga yaabaa inay u muuqdaan kuwo aad u qosol badan oo aad u qosol badan, laakiin haddii aad ka fikirto, waa wax aad loola xiriiri karo. Leslie Knope waxay ahayd qof xiisa badan oo madadaalo leh laakiin iyadu sidoo kale waxay ahayd mid caqli badan, hami leh, iyo geesinimo leh.
Marka, wax kasta oo aad rabto inaad sameyso, noqo Leslie Knope. Baro wax ku saabsan Qodobbada Dhiirrigelinaya Leslie Knope ee Hoggaanka & Adeegga.
GovLoop - 5 Xigasho Leslie Knope oo na bari kara ka shaqaynta Dawladda
TopTenz - 10ka Qodob ee ugu wanaagsan ee laga soo xigtay Leslie Knope
GanacsiNewsDaily - 7 Dhiirrigelinta Leslie Knope ayaa soo xigatay in Hoggaamiyeyaashu ay ku noolaadaan
43 Xigasho Awood leh oo Ku Saabsan Geesinimada iyo Geesinimada sanadka 2021
50 Xigasho Dhiirigelin Ah Oo Ku Saabsan Nolosha Iyo Halganka 2021 -ka
Dad badan ayaa jecel inay waqti tayo leh la qaataan qoysaska iyo saaxiibbada inta lagu jiro habeenada ciyaarta, laakiin badiyaa…
Sida Loo Helo Shatiga Guurka Florida | Hagaha Buuxa
Waad ku hawlan tahay, hambalyo! Haddii aad degan tahay gobolka Florida ama aadan qaadan shatiga guurka…